Cimilada: Talooyin iyo talooyin aad ufilan si aad uga hortagto weerarada internetka
Hacking waa khatar aad u weyn in shirkadaha intooda badan ama xitaa dadku maalin kasta la kulmaanhawlaha. Khawariistu wuxuu leeyahay aqoonta helitaanka macluumaadka shakhsi ahaaneed iyada oo la abuurayo server ku meel gaar ah oo aan sharci ahayniyo adeegsiga server sida wareejinta spam. Xakamaynta badiyaa waxay bartilmaameedsanayaan bogagga internetka oo leh amaan aasaasi ah
Nik Chaykovskiy, Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamiisha Sare ,waxay ogyihiin sida looga hortago dambiilayaasha internetka inay jabiyaan:
Dib u cusbooneysiiya Barnaamijka
Waa lagama maarmaan in la cusbooneysiiyo dhammaan software-kada sida ugu macquulsan. Sidan,nidaamku wuxuu ilaaliyaa isticmaalaha waxana uu ka hortagaa kambiyuutarrada in laga helo goobta. Taas awgeed, waa wax aan macquul aheyn in weeraryahannadu ay meel fog ka galaanhelitaanka oo u adeegso mulkiilaha. Mid ka mid ah wuxuu isticmaali karaa Bixiyeyaasha CMS sida Magento oo soo gudbiya cusbooneysiinta iyo plug-ins kaas oo inta badan bogagga shabakadahaIsticmaal. Qaadashada tallaabooyinka noocaas ah ayaa mulkiilaha goobta ka dhigaya tallaabo hor leh oo looga hortagayo feylaleyaashii rabshad leh ee ujeedkoodu xun yahay si dib loogu galo albaabka albaabka.
Ku rakibo Plugins Security
Ka dib markii la cusbooneysiiyo dhammaan software-ka, hubi inaad labajibboodo websaydka adigoo rakibayakhidadaha amniga sida iThemes kuwaas oo ogaan kara nooc kasta oo jooji iyo hagaajin. Xogta shabakada internetka ee SiteLock waxay tilmaami kartaa iyosaaro dhammaan barnaamijka aan la rabin oo la aqoonsado wixii cillad ah oo la abuuray.
Habka Xawilaadda Qodobka Hoose (Hyper Texture Protocol Protocol) (HTTPS) waa qawaan ilaalin oo hubiyaxifdinta dhammaan isgaadhsiinta ee u dhaxeeya browserka iyo website-ka. Hadafkeedu waa inuu ilaaliyo daacadnimada qarsoodiga ahmacluumaadka sida xogta kaararka deynta iyo passwords..Khubarada waxay ku talinayaan in dukaamada internetka ay isticmaalaan talooyinkan loogu talagalay portalladooda. Kuhubin nabadgelyo dheeraad ah, qofku waa inuu isticmaalaa HTTPS isaga oo kaashanaya Amniga Socket Security (SSL), iyo Amniga lakabka Gaadiidka.
Weerarkii saldhigga milatari ee SQL waa marka hackerku awoodi karo inuu galo qofka ugu muhiimsanmacluumaadka adoo isticmaalaya URL-yada ama qaabka shabakada. Si looga hortago weerarrada Cadaadiska ee SQL, mid waa inuu isticmaalaa weydiimaha loo baahan yahay. Waxay hubiyaan inshabakadda internetka ee koodhka ilaha ayaa leh sifooyin ku filan oo looga hortagayo meel bannaan oo furan oo loogu talagalay hackers si loo burburiyo
Isticmaal Nidaamka Badbaadada Macluumaadka
Qoraal ka-gudubka (XSS) ayaa badanaa ah weerar kaas oo khaniisad-bixiyeyaashu uu fuliyo xaasidnimoqoraallo ku qoran website-ka la aqoonsan yahay. Su'aalaha la barbardhigo waa qalab loo isticmaalo si looga hortago weerarrada kuwaas oo hubinaya inaan mar kale bannaaneynsi aad u gashid kombiyuutarada si aad u gashid. Qawaaniinta Nabadgelyada Nabadgelyada Nabadgelyada ayaa sidoo kale muhiim u ah kahortagga weerarrada XSS sidii ay u oggolaan lahaayeen gelitaanka goobo gaar ahBrowser keliya ayaa la aqoonsan yahay wuxuuna u oggol yahay gelitaanka qoraallada saxda ah. CSP waxay tilmaamaysaa daalacashada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah.
Waa lagamamaarmaan u ah milkiilaha goobta inuu isticmaalo ereyada kakan ee kumbuyuutarrada ahsi fudud u aqoonsadaan. Waxa kaliya oo dhaca haddii mulkiiluhu uu isku daro calaamado gaar ah, tirooyin, iyo waraaqo loogu talagalay sirta.
Khasaaradu waxay tarjumi karaan fariimaha maamulka iyo diiwaangelinta iyada oo loo marayo server websaydh.Waxay raadin karaan magacyada sida 'helitaan,' sidaas awgeed sii kordhaya awoodda hacker ee awoodda si ay u wiiqdo ammaanka bogga internetka. Si loo yareeyo fursaddaTani dhacaya, iska hubi inaad u magacawdo dhammaan faylasha maamul.
Waa fikrad inaad ku jirto dhinaca nabdoonaanta adoo siinaya doolarka ugu sareeya ee khayraadka ammaanka ugu fiican.Ka wada-hadallada kor ku xusan, waa toddobo ka mid ah talooyinka ugu fiican ee laga rabo in laga bilaabo bogga internetka Source .